Football Khabar » बार्सिलोनाको जर्सी लगाउनासाथ रियल मड्रिडलाई डे जोङको ‘काउन्टर’ !
बार्सिलोनाको जर्सी लगाउनासाथ रियल मड्रिडलाई डे जोङको ‘काउन्टर’ !
नयाँ सिजनको पहिलो इएल क्लासिको घरेलु लिग ला लिगाअन्तर्गत १०औं साताको खेलअन्तर्गत आगामी अक्टोबर २७ तारिखमा हुँदैछ । सो खेल बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा हुनेछ । त्यसपछि सिजनको दोस्रो इएल क्लासिको २६औं सातामा जनवरी ३ मा रियलको घर बेर्नाबेउमा हुनेछ । गएको सिजन कूल ४ इएल क्लासिको भएको ३ मा बार्सिलोनाले बाजी मारेको थियो भने एक भने बराबरीमा सकिएको थियो ।
बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई पछिल्लोपटक सन् २०१० मा ५–० ले हराएको थियो । सो खेलपछि बार्सिलोनाका डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले ५ गोलको संकेत गर्दै देखाएको ५ औंलाको सेलिब्रेसन अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ । त्यसयता बार्सिलोनाले फेरि रियललाई ५–० को अन्तरमा हराउन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति २१ असार २०७६, शनिबार ११:४६